I-Recipe yeSauce Sauce
I-spicy tomato sauce Ukuba wena okanye umntu ovela kwintsapho yakho uyakuthanda utamatisi kunoma yiphi na ifom, kunye nezitya ezikhethiweyo ngeetchup okanye i-tomato sauce, ngoko kufuneka nje ufunde indlela yokulungisa i-tomato sauce ngokwakho. Ngokukodwa kubandakanyeka kwabo bahluma utamatisi kwicebo labo. Ngamanye amaxesha isivuno sinesityebi kangangokuthi kungokoqobo ukutya zonke iitamatisi zexesha. Enyanisweni, umntu unokwenza i juice kubo, ityuwa, i-marinate ize idibanise. Kodwa kungcono ukuzondla ubusika kunye nokuzenzela, okuphekwe kwi-tomato sauce yakho, ngokuqinisekileyo ayiyi kuba naluphi na ulondolozo, idayi okanye ezinye izongezo eziyingozi. Ukuwususa akusikho nzima, kufuneka ukhethe ixesha. Kodwa, ukuba ube nolwazi olu bulumko lokutya, unokukwazi ukuzalisa ngokulula ukutya kwakho kunye nezitya ezintsha ezintsha. Emva koko, i-tomato sauce ayinakunikwa kuphela inyama okanye i-dumplings, ilungiselelwe nge-pasta kunye ne-pizza, imifuno ifakwe kuyo, ifakwe ngenyama okanye intlanzi xa ibhaka. Ngokutshintsha inani lezithako, unokwenza le sauce ibe yincinci okanye ithambile. I-spicy ifaneleka ngakumbi kwi-shish kebab nakwezinye izitya zokutya, kwaye unokwenza utyane iiswidi kunye neepuni, ngoko ke ziyanandi.
Utamatisi 3 ama-pcs.
Ipepper ecocekileyo iingu-0.25.
Inyathelo 1 Kule mali yesithako, i-0.5 ilitha ye-sauce iyatholakala. I-apula ifanele ibe mnandi, iitamatisi zivuthiwe kakuhle, inani lepilisi elitshisayo kunye netyuwa kungcono ukutshintshela ukunambitha.
Inyathelo 2 Iikroti, i-pepper enomnandi kunye ne-apula ukuhlamba, ukubola kunye nokusika amaninzi.
Inyathelo 3 Hayila utamatisi, i-peel uze uthathe.
Inyathelo 4 Ukubetha kwi-blender okanye i-twist izaqathi, i-pepper e-sweet, i-apula kunye neetatayi kwindawo yokugaya inyama.
Isinyathelo 5 Thele iifatata ezifakwe emifinini epileni, zilethe kuphephe kwaye upheke ihora eli-1 phezu kobushushu obuphantsi.
Inyathelo 6 Ngokukodwa utyhuse umpompi otshisiweyo kunye negalikhi.
Inyathelo lesi-7 Emva kweyure yokubilisa, yongeza ioli ye-vegetable, umxube wepilisi kunye negarlic kwi-sauce, ize ityuwa ibe yintle.
Isinyathelo 8 Bilisa i-sauce enye imizuzu eyi-10. Emva koko ususe kwindawo yokushisa, epholile kwaye inokusiwa.
Irayisi edibeneyo kwiibhotile
Inkomo kunye neziqhwala
I-Croquettes evela kwii-groats zengqolowa
Indlebe evela kwisigurgeon
Izindlela zokulwa noxinzelelo
I-trimester yesibini yokukhulelwa. Iinkonzo kunye neNgqungquthela
Iintlobo zobisi besikhumba kunye nokunyamekela
Amazinyo okugcoba abantwana
Indlela yokwenza i-makeup kwintombazana eselula
Ufanele uziphathe njani ngenyanga yokuqala yokukhulelwa?